Naiditra am-ponja daholo kosa ireo voasambotra. « Afak’omaly no nosamborina ireo olona telo voarohirohy tamin’ity fakàna an-keriny ity. Natolotra ny Fitsarana izy ireo dia naiditra am-ponja vonjimaika. Teo anelanelan’izay dia nandrahona ny mponina sasany tao Ankazobe fa hamaly faty ny zandary, indrindra ho an’ireo izay monina ivelan’ny lakazerina. Efa voafehy anefa ny toe-draharaha noho ny ezaky ny lehiben’ny Kaompanian’ny zandary any an-toerana », hoy ny fanampim-baovao avy amin’ny Zandarimariam-pirenena.
Raha tsiahivina dia nisy fetin’ny fikambanan’ny vehivavy vadina zandary tany an-toerana tamin’io fotoana io. Nilanonana ny tao an-tobin’ny zandary izy ireo. Nisy olona roa izay tsy nasaina anefa tonga tao amin’io fotoana io. Rehefa variana nikorana ny rehetra dia nivoaka moramora ireo roa lahy ireo. Ora vitsy taorian’io vao tsikaritra fa tsy hita ny ankizilahy iray 2 taona, izay zanaka zandary. Teo vao nokarohina ireo roa lahy.
Tratra ny iray tamin’ireto farany ary nanoro ny namany izy. Nosamborina io olona io izay tsy iza fa ny filohan’ny fokontany Morafeno ao Ankazobe ihany. Taorian’izay no nisamborana ilay fahatelo.